टेरिया भन्छिन् ‘हिम्मत नहार्नु, एकदिन सफल भइन्छ’
Sat, Jul 21, 2018 | 19:26:58 NST
11:44 AM (4years ago )
Total Views: 30.9 K
भारतको टेलिभिजन च्यानल जीटिभीको रियालिटी शो डान्स इन्डिया डान्स (डिआइडी) लिटिल मास्टर्सको उपाधी जित्न सफल नेपाली बालिका टेरिया मगरलाई बधाई र शुभकामना थाप्न भ्याईनभ्याई छ ।
११ वर्षकी टेरिया शनिबार काठमाडौं फर्किंएकी छिन् । काठमाडौंमा उनलाई विशेष सम्मान गरिएको छ । पाल अाउनुअघि मुम्बर्इमा रहेकी टेरियासँग उज्यालो अनलाइनका लागि मिलन तिमिल्सिनाले टेलिफोनमा गरेको कुराकानी:
सबैभन्दा पहिले त टेरियालाई धेरै धेरै बधाई
धन्यवाद । तपाईंहरु सबैको सहयोगले म यहाँसम्म पुग्न सफल भएँ । मलाई भोट दिने, माया गर्ने, साथ दिने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ । फाइनल हुनु पहिले काठमाडौं आएर फर्कंदा पनि मैले भनेको थिएँ–मलाई भोट दिनुहोस्, देशको नाम चिनाउने छु भनेर । तपाईंहरुले भोट दिनु भो । मैले देशको नाम रोशन गरेजस्तै लागेको छ ।
भारतमा यति ठूलो उपाधी हात पार्न सफल भएकोमा कस्तो लागिरहेको छ ?
निकै खुशी लागेको छ । अडिसन दिन आएदेखि नै मलाई टप टेनसम्म पुग्छु भन्ने लागेको थियो । टपटेनमा पनि पुगें । टप फाइभमा पुगें । अनि फाइनमा पुगें । त्यति मात्र होइन, उपाधी नै जितें । निकै खुशी लागेको छ । सोचेको जस्तै भयो ।
उपाधीको अन्तिम घोषणा हुने बेला कस्तो लागेको थियो ?
निकै डर लागेको थियो । पक्कै मैले नै उपाधी जित्छु भन्ने त पहिले पनि लागेको थियो । तर उपाधी कसले जित्छ भनेर घोषणा भैरहँदा, पर्खिरहँदा निकै छटपटी भयो । उकुसमुकुस भयो । जब उपाधीको घोषणा भयो, अनि त खुशीको सीमा नै रहेन ।
उपाधी जितेपछि प्रतिष्पर्धी साथीहरु, अनि निर्णायकहरुले के भने ?
सबैले बधाई दिए । नेपाल पनि राम्रो, नेपाली पनि राम्रा, नेपालकी छोरी पनि राम्रो भने ।
उपाधीसँगै जितेको १० लाख रुपैया के गर्छौ ?
खै के गर्छु के थाहै छैन ।
अब त सबैले चिने । सांगीतिक कार्यक्रममा बोलाउलान् । सबैतिर समय दिन भ्याइन्छ ?
भ्याएसम्म जान्छु । तर पहिले त मैले पढाई पूरा गर्नुपर्छ ।
तिमीजस्तै प्रतिभाहरु गाउँठाउँमा अरु पनि होलान् । जसले अवसर पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुलाई के भन्छौ ?
मजस्तै साथीहरु पक्कै पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई भन्छु कि कहिल्यै हिम्मत नहार्नु । नडराउनु । यस्तै कार्यक्रम भएको ठाउँमा जानु । भाग लिनु । हिम्मत नहारे, नडराए सफलता पक्कै हात लाग्छ । अनि अभिभावकहरुले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई यस्ता कार्यक्रममा लगेर प्रतिभा देखाउने अवसर दिनुपर्छ ।